December | 2019 | bishnunmdc
कर्णालीमा प्रचलित बोन, शैव र बौद्ध धर्म दर्शनको परम्परा
Posted on December 3, 2019 by bishnunmdc
वि.सं. २०७६ वैशाख २७ र २८ गते सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेसस्तरीय वाङ्मय सङ्गोष्ठीमा प्रस्तुत विचार–पत्र । प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी परिमार्जन सहित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको दर्शनावली ६ मा प्रकाशित कर्णालीमा प्रचलित बोन, शैव र बौद्ध धर्मदर्शनको परम्परा । धन्यवाद सहित साभार ।
 विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुली
‘हाम्रा निम्ति हावामा रससिक्त मधु व्याप्त छ, नदीहरू मधुरस छरिरहेछन् । हाम्रा निम्ति वनस्पति–औषधहरू मधुरसयुक्त होऊन् । हाम्रा रात र उषा मधुरसयुक्त प्रीतिकर रहून् अनि पृथ्वी तथा त्यसका रजकण मधुरसयुक्त रहुन् । हाम्रा आकाश र अन्तरिक्ष मधुरस वर्षा गरुन् । वनस्पतिहरू मधुरसयुक्त होऊन् र सूर्य पनि हाम्रा निम्ति मधुमान रहून् । हाम्रा गाईवस्तु मधुरस दूध दिने रहिरहून् ’ ऋ.वेद गौतम ऋषि (दीक्षित, २०७२ः १) ।
कर्णाली मानव सभ्यता, इतिहास, धर्म–दर्शन र हिमाली संस्कृतिको पावन भूमि हो । सिन्धु सभ्यताको विकास हुनुभन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रमा मानवको बसोबास भएको थियो । त्यसैबेलादेखि कर्णालीका बासिन्दाले प्रकृतिबाट जीवनोपयोगी फल लिन, प्रकृतिको संरक्षण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न प्रकृतिको पूजा गर्दथे । करिब १० हजार वर्ष पहिलेदेखिको त्यो चलन आज बोन, शाक्त, शैव, सनातनी हिन्दू, बौद्ध आदि धर्म दर्शनको रूपमा मौलिक संस्कृति बनेर रहेको छ । दशौँ हजार वर्ष पुरानो सभ्यता, धर्म र संस्कृतिको आधारमा नै यसै भूमिबाट दशौँदेखि चौधौँ शताब्दी करिब ४०० वर्ष खस साम्राज्यको विस्तार भई जुम्लाको सिँजामा यसको राजधानी रहेको थियो । खस साम्राज्य पूर्वमा त्रिशुली, पश्चिममा लद्दाख, उत्तरमा गुगे हुँदै कैलाशदेखि पूर्वसम्म र दक्षिणमा तराईसम्म फैलिएको
थियो । गुसेफ टुचीले खस साम्राज्यलाई इटालीभन्दा ठूलो रहेको भनेका छन् ।
खस साम्राज्यको पतनसँगै राज्यको तहबाट कर्णाली क्षेत्र ओझेलमा प¥यो । मनसुन पश्चिम पुग्दा कम वर्षा हुने अर्थात् पश्चिमी वायुको वर्षा कम हुने, मौसममा आएको परिवर्तनले अत्यधिक र न्यून हिउँ पर्ने, राज्यबाट दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना नपर्ने आदि कारणले मानव सभ्यता, हिमाली संस्कृति, बोन, शाक्त, शैव धर्मदर्शन र आयुर्वेदको खानी सिङ्गो कर्णाली कमजोर बन्यो । आज द्रूत सञ्चार र आधुनिक प्रविधि विकासको युगमा आईपुग्दा यो क्षेत्र चार माना चामल लिन चार दिन हिँड्नुपर्ने स्थितिमा छ । यहाँ रहेका हजारौँ वर्ष पुराना पुरातात्विक वस्तुहरू भीर, खोँच, सभ्यताका स्रोत कर्णाली, हिमा, तीला, भेरी, सेती किनारमा अलपत्र छन् । डोल्पोलाई मात्र किन प्रकृति, संस्कृति, मानव विकास एवम् आधुनिक राज्य र भाषाको उद्गमस्थल रहेको सिङ्गो कर्णालीलाई राज्यले आफ्नो ठानेन
(पराजुली, २०७४ः१२) ।
यो प्रस्तुती कर्णालीमा भएको मानव सभ्यता, प्राचीन धर्म, परम्परा एवम् संस्कृतिबारे छलफल, खोज, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि जिज्ञासाको ढोका खोल्ने प्रयास मात्र हो । पदयात्रा गर्दा गरिएको स्थलगत अवलोकन, स्थानीय बासिन्दासँगको कुराकानी, मेरा दुई पुस्तक, नेपाली तथा विदेशी लेखकका पुस्तक एवम् विज्ञसँगको छलफलका आधारमा यसलाई तयार पारिएको हो । धर्म र संस्कृतिको विषय भएकोले कर्णालीको कृषि, लेक र बेसी, नुन र पिठो लिन तिब्बत पुग्नुपर्ने जस्ता दैनिक जीवनचक्रबारे चर्चा गरिएको छैन । त्यसरी नै त्यहाँका खस जाति, जनै लगाउने र नलगाउनेबारे चर्चा गरिएको छैन ।
हिमालय, हिमाली सभ्यता, हिमाली सुन्दरता सृष्टिदेखि नै आकर्षक रहे । प्रकृतिका यी सुन्दर रचना नेपालको हिमालय मात्र नभई हिमालय, हिन्दूकुश, काराकोरम, पामिर, तियान सान र कुन लुन पर्वतमालाका चुचुरा हाम्रा हिमालजस्तै एकअर्कासँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेर रहे । तेथिस सागरको अन्त्य भएको र उच्च हिमालय शृङखला उठेको पछिल्लो समय करिब १५ लाख वर्ष भएको छ । हाम्रा हिमालभन्दा उत्तरमा रहेको तिब्बतको पठार हिमालयभन्दा जेठो छ । ६ करोड वर्ष पहिलेदेखि त्यस क्षेत्रबाट बगेर आएका नदी अहिले हिन्द महासागरमा मिसिएझैँ तेथिस सागरमा मिसिन्थे (क्यामरोन, सन् १९२४ः ११) । विख्यात भूगर्भविद टोनी हेगनका अनुसार हिमालयको उत्पत्ति ६ लाख वर्ष अघि मात्र भएको हो । यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई प्रारम्भिक मानवले देखेको हुनपर्छ किनभने त्यसबेला पेकिङ मानव अस्तित्वमा आइसकेको थियो (हेगन, वि.सं. २०५८ः पृ.३८) ।
आठ हजार मिटरभन्दा माथिका अन्नपूर्ण र धवलागिरि हिमालको बीचमा कालीगण्डकीको संसारकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी बन्नु यो प्रक्रियाको निरन्तरता हो । पृथ्वीको हलचलको यो क्रम जारी छ । २०७२ सालको भूकम्पमा परेको लाङटाङका लागि त्यो प्रत्यक्ष एउटा प्रलय थियो । यो विकासक्रमसँगै जीवजन्तु, बोटबिरुवा र मानवको उत्पत्ति भएको कुरा वैज्ञानिकले पुष्टि गरेका छन् । समयसँगै हिमालय, पामिर, र काराकोरमको दक्षिण भाग मनसुनी र पश्चिमी अरब वायुको कारण मानव, जीवजन्तु, रूखबिरुवाको लागि अति नै उपयुक्त क्षेत्र बन्यो भने उत्तरी खण्ड र मध्य एसियाको ठूलो भूभाग–एक समयका सुन्दर बगैँचा मरुभूमिमा परिणत भए ।
हिमालयको दक्षिणमा जीवन र उत्तरमा मृत्युजस्तै भयो । हालैका वर्षमा भएको मौसमी परिवर्तनले बनेका हिमताल, कर्णालीमा भएको सुख्खापन प्रत्यक्ष भोगेका कुरा हुन् । विकासक्रमसँगै पश्चिममा आधुनिक युगको सुरुआत भइसक्दासम्म पनि नेपाल रहस्यमय देश, तिब्बत प्रतिबन्धित क्षेत्र, पामिर तेस्रो ध्रुवको रूपमा अन्धकारमा रहे । जबकी, यो क्षेत्र नै मानव सभ्यता, धर्म र संस्कृतिको जननी
वानरदेखि मानवमा सङ्क्रमणको प्रत्यक्ष प्रमाण दिने आदि मानव रामापिथेकसको एक करोड दस लाख वर्ष पुरानो अवशेष सन् १९८० मा बुटवलमाथि तिनाउ नदीको दाहिने किनारमा भेटियो । बर्दिया जिल्लाको दानव तालछेउमा भेटिएको एकधारे ढुङ्गाको छुरी चीनको प्राचीन ‘गेहे’ मानव र फ्रान्सको ‘चेलियन’ मानवको ढुङ्गे हतियारसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यसको समय ५–६ लाख वर्षपूर्व अनुमान गरिएको छ । सुर्खेत उपत्यकामा भेटिएका ढुङ्गाका कोदाला र बञ्चरा ई.पू. १५ हजार वर्ष पुराना मानिएका छन् । मुस्ताङ, टुकुचे, चोखोपानीका चिहानमा १० हजार वर्ष पुराना भाँडाकुँडा पाइएका छन् (प्रश्रित, २०७४ः १७–१८) । वैज्ञानिकका अनुसार पहिलो मानव हामोइरेक्टस १५ लाख वर्षपहिले अफ्रिकामा पाइएको हो (क्यामरोन, सन् १९२४ः १६) ।
नदी किनारमा भएको मानव सभ्यताभन्दा अघिल्लो चरण, ५ लाख वर्ष पहिलेका हाम्रा पुर्खा पानीको मुहान, अग्ला पहाड र हिमालय क्षेत्रमा बस्न थाले । हिमालयको उत्तरी खण्डमा ५० हजार वर्ष पहिलेसम्म रूखबिरुवा पाइन्थ्यो । नेपालको भूबनोटमा हिमाल, पहाड र तराई भएकाले प्रकृतिको सुन्दर बगैँचा बन्न गयो, फलस्वरूप यो क्षेत्र मानव बसोबासका लागि उत्तम ठहरियो । नेपालको प्राक् इतिहासमा रुद्र, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, वृषभ, किराँत आदि गणजाति यस भूमिमा क्रियाशील भएका अनेक प्रसङ्ग वेद–पुराणहरूमा उल्लिखित छन् । रुद्र जातिका एघार गणको मूल भूमि हिमाली र उच्च पर्वतीय क्षेत्र थियो (प्रश्रित, २०७४ः १९) । महामाताहरूको नेतृत्व माथिल्लो कर्णालीमा अझै पनि छ ।
यो महादेशको हिमाली प्रदेशमा रहेका यक्ष, राक्षस, गन्धर्व आदि समाज विकासको प्रथम चरणमा मानव समाजको रूपमा थिए तर तिनीहरूलाई पछि ‘देव योनी’ भनियो (दीक्षित, २०६५ः ऋग्वेदः केही प्रमुख सूक्त, भूमिका पृ.ब) । हिमाल, पहाड र तराईले रैथाने जातजाति, संस्कृति र रहनसहनमा फरकपन ल्याउन भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले समथर भूभाग हुने युरोपका धेरै देशमा एकै प्रकारको संस्कृति र जाति पाइन्छ भने हिमाली क्षेत्र हाम्रो नेपालमा मात्र १२४ भन्दा बढी जनजातिको बसोबास रहेको छ र सोहीअनुसारको सहअस्तित्वमा आधारित संस्कृति पनि । कर्णालीकै डोल्पा, हुम्ला, सुर्खेत, दैलेखमा एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा हुने संस्कृति, भेषभूषा र रहनसहनमा धेरै फरक अनुभव गर्न सकिन्छ । विविध संस्कृति भए तापनि तिनीहरू एकअर्कामा नङ र मासुजस्तै भएर रहेको व्यवहारिक जीवनमा देखिन्छ ।
पश्चिममा पामिरदेखि पूर्वमा तिब्बतको नाम्चा वारवाको करिब २५०० किलोमिटर क्षेत्र पामिर, हिन्दूकुश, काराकोरम एवं हिमालयको उत्तर र दक्षिणमा मानिसको बसोबास दसौँ हजार वर्ष पहिलेदेखि भएको हो । मानव सभ्यताको विकाससँगै कृषि र पशुपालन गर्न सुरु गरेदेखि नै मानव प्रकृति पूजक बन्न थाले । नेपालका जनजातिले हिमाललाई आफ्ना पितृ बस्ने थलो (प्रभात, ज्ञानविन्दु–११ः१०५) मानेझँै कुनलुन क्षेत्रका बासिन्दाले पनि हावा, आगो, पानी, चट्याङ, रूख, ढुङगा, हिउँ, नदीको आराधना गर्दथे । नेपालका सबै जातजातिमा त्यो चलन अहिले पनि छ । प्रकृति पूजाका त्यस्ता उदाहरण कर्णालीका गाउँका कानी चोर्तेन र लुङदार, दोबाटो, पुल, मन्दिर आदिमा काठ कुँदेर बनाइएका लिङ्गका चित्र, देवीका मूर्ति, मष्टोका थान, देउलीमा राखिएका ध्वजामा पाइन्छ ।
विशाल हिमालयको ठूलो भूभाग नेपालमा छ । त्यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत र जीवजन्तु नेपालमा छन् । त्यसबाहेक बोन, शाक्त र शैव दर्शनसहित वैदिक युगमा रचिएका ऋग्वेदका सयौँ ऋचा, समग्र यर्जुवेद, उपनिषदहरू, रामायण, पाणिनिको व्याकरण, कपिलको साङ्ख्य दर्शन र बौद्ध दर्शनको जन्मदाता पनि नेपाल नै भएको भन्ने प्रमाण क्रमशः आउँदैछन् । भारतीय प्रकाशन गृह र त्यहाँका लेखकले पुराण र हिन्दू संस्कृति अङ्कमा पहिलेदेखि समावेश गरिएका नेपालका तीर्थ, ऐतिहासिक विवरण र महŒव आजकल हटाउँदै लगेको हुनाले पनि नेपालले अनुसन्धान गर्नैपर्ने बेला आएको छ ।
कालिदासले कुमारसम्भवम् महाकाव्यमा ‘उत्तर दिशामा देवताको आत्मा हिमालय गरेको पर्वतराज छ’ भनेको भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको उत्तरको हामीले देखेको विशाल हिमालय शृङ्खला मात्र नभई प्राचीन कालमा अहिले यस हिमाली उपमहादिपमा भएको शैव, मष्टो, बोन, बौद्ध धर्म–संस्कृति पामिर, काराकोरम र हिन्दूकुशसहित काजकास्तान र मंगोलियासम्म फैलिएको थियो । अझ सङ्क्षिप्तमा भन्दा कर्णाली क्षेत्रमा भएको यो धर्म सिन्धु सभ्यताभन्दा पहिलेदेखिको हो किनकि यहाँ बस्ने आदिवासी त्यो भन्दा पहिलेदेखिका हुन् जुन मुस्ताङका गुफा र कर्णाली उपत्यकाले पुष्टि गरेका छन् ।
केहि विदेशी लेखक एकाध महिनाको छात्रवृत्ति लिएर नेपाल छिरी गरेको अनुसन्धानमा माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रको संस्कार, संस्कृति, धर्मदर्शनलाई हुबहु तिब्बतबाट आयातित भनी लेखेका छन् त्यो नभई तत्तत् क्षेत्रमा विकसित भएका हुन् जुन हाम्रा वैदिक ग्रन्थले पनि पुष्टि गरेका छन् भनी मैले मेरो पुस्तक डोल्पोमा पनि उल्लेख गरेको छु । पछिल्लो कालखण्डको इतिहासको पाटोबाट हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा करिब ४०० वर्ष खस भाषाको विकास र साम्राज्यको प्रभाव रहन गयो । त्यसको भाषिक र सांस्कृतिक प्रभाव कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अहिले पनि ज्यूँदो छ । ‘नेपालको खस साम्राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा बौद्ध धर्मको विस्तार भएको कुरा तत्कालीन खस साम्राज्यका प्रभावकारी राजा मलय वर्माले वि.सं. १४३५–१४४६ खोजरनाथ (हाल पुराङ, तिब्बत, चीन) मा १८ गुम्बासहितको एक बौद्ध विहार बनाउन लगाएको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ (अधिकारी, वि.सं. २०६१ः १६६) ।
A woman with hand prayer wheel in Paluryan Thekchhok Hosalling Monastery, Simikot, Humla
दुल्लु र सिँजाबाहेक डोल्पाको शे उपत्यका, हुम्लाको रलिङ, मुगुको मुगुममा रहेका हजारौँ वर्ष पुराना गुम्बा लोप भएका छन् र धेरै लोप हुने अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म देख्न सकिने डोल्पाको शे गुम्बा १ हजार ५ सय वर्ष पुरानो हो । तीभन्दा पुराना बोन गुम्बा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । पुरानो बोन धर्म क्रियाशील र जीवन्त रहेको विश्वको मूल थलो डोल्पा नै हो । बोन धर्म छार्का भोट (डोल्पा)बाट फैलिएको सङ्केत गर्दै त्यहाँ त्यो जीवन्त रहेको कुरा जापानी भिक्षु कावागुचीले उल्लेख गरेको पाइन्छ (प्रभात, ज्ञानबिन्दु ११ः१०१) । यी कर्णालीका सम्पत्ति हुन र आयातित होइनन् भन्नेमा मेरो जोड रहेको छ ।
२. कर्णालीको भौगोलिक चिनारी
नयाँ संरचनाबमोजिम कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम–पश्चिम, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत रहेका छन् । हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्तरी सीमामा चीनको तिब्बत रहेको छ । पश्चिममा सुदुरपश्चिम प्रदेश, पूर्वमा गण्डकी, दक्षिण पूर्व र दक्षिणमा प्रदेश पाँचसँग सीमा जोडिएको छ । सात प्रदेशमध्ये २४,४५३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । सेती र भेरीसहित नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज शेफोक्सुण्डो, सबैभन्दा गहिरो ताल शेफोक्सुण्डो, सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, कान्जिरोवा हिमाल यहीँ प्रदेशमा पर्दछन् । यहाँको जनसङ्ख्या १५,७०,४१८ छ भने साक्षरता प्रतिशत ६२ रहेको छ । आधुनिक विकासको लागि प्रचुर सम्भावना यहाँ छ ।
२.१ कर्णालीमा मानव सभ्यता
६ लाख वर्षपहिलेसम्म हिमालयको निर्माण तीव्र थियो । २ लाख वर्षपहिले काठमाडौँको तलाउ सुकेको हो । दक्षिण एसियामा विभिन्न मूलका मानिस बस्छन् । ऋग्वेदमा दस्यू भनेर उल्लेख गरिएका मानिस प्रागऐतिहासिक कालका थिए । २००० देखि १५०० ई.पू.मा पश्चिम–उत्तरबाट आक्रमण गरेर यहाँका मूल बासिन्दालाई विलीन गराए वा धपाए । त्यसैले यहाँ ककेसियन, वेडाइडस, मेलानिडेस
(आदिवासी) र मङ्गोल तीन प्रमुख समूह पाइन्छ र यसको राम्रो उदाहरण नेपाल हो । नेपाललाई एसियाको जातीय सङ्गमस्थल भन्न सुहाउँछ (हेगन, २०५८ः४४) ।
कर्णाली क्षेत्रमा भएको मानव सभ्यताको इतिहास सिन्धु सभ्यताभन्दा पुरानो हो । पूर्वीय दर्शन, चिन्तन, धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा विश्वमा सबैभन्दा धनी छ । यसका चिन्तक र प्रवद्र्धक ऋषि नेपालका हुन् । त्यसमध्ये धेरै कर्णालीका हुन् । मानव बसोबासका लागि उत्तम क्षेत्र भएकाले यहाँ कम्तिमा १० हजार वर्षपहिले देखि मानिस बसोबास गरेको तथ्य पाइन्छ । त्यसबाहेक मध्यएसिया, मध्यपूर्वका मानिस यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि उपयुक्त बसोबासको क्षेत्र भएकाले यहाँको धर्म, संस्कृति अवलम्बन गरी यतै बसे ।
प्रकृतिपूजक बोन र मातृपूजक शैव र तीसँग सम्बन्धित मष्टो, लिङ्गपूजक कर्णाली र कैलाशवरपरको क्षेत्रमा विकसित भएका हुन् । कर्णालीमा त्यसबेलाको धर्मदर्शन र संस्कृतिको पहिचान बोकेका मातृसत्ताको परम्परा, धामी, झाक्री, तन्त्र, मन्त्र, आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग, लिङ्गको चित्र बनाएर दोबाटोमा राख्ने आदि कुरा अहिले पनि देख्न पाइन्छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा जसरी ४० को दशकमा चाँगुनारायण, पशुपति र ५० को दशकमा सुर्खेतको कार्केविहारमा हजारौँ वर्ष पुराना बोन, शाक्त, मष्टो, सनातनी हिन्दू, बौद्ध संस्कृति समेटिएका मूर्तिहरू यत्रतत्र छरिएका देखिन्थे, त्यसैगरी आज चाहे जुम्लाको सीताको पाइलो होस्, सिँजा उपत्यकाका भग्नावशेष हुन् वा छार्का, साल्दाङ, लिमी, मुगुमका चोर्तेनका भित्तेचित्र वा गुम्बा किन नहुन् कर्णालीका गाउँमा ४–५ हजार वर्ष पुराना पुरातात्विक महŒवका वस्तु यत्रतत्र छिरलिएर रहेका छन् । चोरी भएका छन्, लापत्ता पारिएका छन् ।
हिमालयको दक्षिणी क्षेत्र सुगम हावापानी भएकाले मध्यपहाडी भागमा पूर्वबाट भोटबर्मेली, पश्चिमबाट भारोपेली आए । त्यसैले यो पूर्व र पश्चिमबाट बसाईसराईको भेल ठोकिने ठाउँ बन्यो । कर्णाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा पश्चिमबाट आएका र यसै क्षेत्रमा दसौँ हजार वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्ने आदिवासी हुन् । यसको पुष्टि गर्न टाढा पुग्न पर्दैन दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा अहिले भएको खेतिपाती, घुमन्ते भई पशुपालन गर्ने चलन, बोन, मष्टो, बौद्ध मिश्रित धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक गुफासँग तुलना गर्दा थाहा हुन्छ ।
कर्णालीको आधुनिक सभ्यतामा हामीले बिर्सन नहुने विषय के भने नेपालको सबैभन्दा लामो मानसरोवर कैलाश क्षेत्रबाट आएको कर्णाली (मुगु र हुम्ला कर्णाली) हो । यस क्षेत्रका बासिन्दाले कर्णालीलाई राकस तालबाट आएको भनी पवित्र मान्दैनन्, त्यो गलत हो । कैलाश पर्वतको दक्षिण काख कर्णालीको उद्गम स्थल हो । अन्य नदीमा भेरी, सेती, तीला, जवा, झुला र तिनले बनाएका विशाल उपत्यका (सिँजा, जुम्ला) र त्यस क्षेत्रमा विकसित मानव सभ्यता हिमाली प्रदेशको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो । खस भाषाको उदगमस्थल कर्णालीको सिँजा हो जसले नेपालको एकीकरण सम्भव बनायो । गुफाकालीन हिमाली सभ्यता, रीमिको पाषाणकालीन प्रस्तरमूर्ति, गुसेफ टुचीका भनाईमा आठ हजार वर्ष पुरानो सिँजा सभ्यता, दत्तात्रय चन्दननाथ, र गुफाकालीन दसौँ हजार वर्षभन्दा पुराना सयौँ बोन गुम्बाहरू नै कर्णाली सभ्यताका धड्कन हुन् । पशुपतिनाथको स्थापना हुनुभन्दा पहिले यस क्षेत्रमा वनदेवी, पितृ, लिङ्ग आदिको पूजा गरिन्थ्यो । कर्णाली सभ्यताको उत्कर्ष खस साम्राज्यको पतनपछि खस्कँदै गयो । एकीकरणपछि शाहवंशीय राजाहरूले त यसलाई शत्रुवत व्यवहार गरे फलस्वरूप कर्णाली सभ्यता भीर, पाखा, नदी किनारमा खुम्चिएर बस्न बाध्य भयो । युगीन परिवर्तनका किरण देखापरेका छन्, अब कर्णाली प्रदेशले नै सभ्यताको खोजी गर्दै विश्वलाई परिचित गराउनुपर्छ ।
२.२ कर्णालीमा प्रचलित धर्म–दर्शनको परम्परा
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा पनि १० हजार वर्ष पहिलेदेखि यहाँका रैथाने जाति पानी नजिकको मुहान, अग्ला थुम्का र गुफामा बसेर कृषि र पशुपालन सुरु गरेका हुन् । आजभन्दा १०० वर्ष पहिलेसम्म मुस्ताङको धे गाउँका बासिन्दा नजिकको गुफामा बस्दथे । काली नदीकिनार रहेको सानो समथर भूभागमा खेती गर्थे । वर्षाको समयमा भेडाच्याङग्रा र चौरी याक चराउन दामोदर कुण्डतर्फको पाटनमा जान्थे, हिउँदमा मुक्तिनाथ क्षेत्रका उपत्यकामा झर्थे । धे गाउँका ५० वर्ष पहिलेका घर माटाका ठूला डल्ला खप्ट्याएर बनाइएका छन् भने आजकल माटोको इँटा बनाई घर बनाउन थालेका छन् । माटोका डल्ला सुकाएर बनाएको घरमा बस्नेबाहेक उनीहरूको पेसा पहिलेजस्तै छ । यसबाट हिमाली क्षेत्रमा मानव बस्न थालेको धेरैपहिले देखि हो र त्यसबेला देखिको धर्मसंस्कृति अहिलेसम्म छ जुन बोनसँग धेरै मिल्दछ ।
कर्णालीमा भएको बोन, शाक्त, शैव, सनातन हिन्दु र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक परम्परा, चाडपर्व, जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कार तथा परम्परा मौलिक छ । कर्णालीका उपत्यका, लाग्ना र गाउँमा भएको पौराणिक धर्म–दर्शनको प्रतिनिधित्व गर्ने जीर्ण अवस्थामा रहेका गुम्बा, मष्टोका थान, लिङ्गका मूर्ति र चित्र, देवल, मन्दिर, कानी चोर्तेनका भित्तेचित्रले पुरानो इतिहासको सम्झना गराएका छन् । बोन, सनातन हिन्दू र बौद्धमार्गीको मात्र नभई विश्वका मानव जातिले सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन नगरी नहुने क्षेत्र हो कर्णाली ।
बसाईसराईबाट मानव सभ्यताको विकास र विनाश दुवै भएको छ । सिन्धु सभ्यताको विनाश एउटा उदाहरण हो । कर्णालीको भौगोलिक फैलावटका आधारमा धर्म र संस्कृतिको पालना र विकास सोहीबमोजिम भएको छ । समथर भूभाग, उपत्यका, पहाडी क्षेत्र, मध्यपहाडी क्षेत्र, हिमालयको ठीक दक्षिण र हिमालयभन्दा उत्तरको उपत्यकामा फरक हावापानी, भौगोलिक फैलावट, वनस्पति र जीवजन्तु फरक–फरक आकारप्रकारमा भएझैँ धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, रीतिथितिमा पनि मौलिकता भेटिन्छ । ती एकअर्कामा नङ र मासु मिलेझैँ मिलेका हुन्छन् । मानव बसोबास, सभ्यता, धर्म र संस्कृतिको विकास कर्णाली क्षेत्रमा हजारौँ वर्षपहिले भएको कुरा मातृपूजाको अवशेष, लिङ्गको चित्र कोरेर दोबाटो र पुलमा राख्ने चलन (तन्त्र), हजारौँ वर्ष पुराना बोन गुम्बा, माने, चोर्तेन, महाभारतकालीन देवल, पाथर नाउली, वीर र कृति स्तम्भ आदि कर्णाली क्षेत्रमा हुनुले पुष्टि गर्दछ । प्रकृतिपूजक बोन, मातृपूजक शैव, ब्रह्मपूजक सनातनी हिन्दूका अनेकानेक धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराको जननी भनेको कर्णाली नै हो, वैज्ञानिक खोज गरी पुष्टि गर्न भने बाँकी छ ।
कुन धर्म कहिलेदेखि आयो ? यो भन्न सायद त्यति सजिलो छैन । नेपाल, तिब्बत, भुटान, अफगानिस्तान, काजकास्तान, मंगोलियामा बौद्ध धर्मको विस्तार हुनुपूर्व बोन धर्म शक्तिशाली भएको धेरै प्रमाण पाइन्छन् । हिमाली क्षेत्रको मानवीय सभ्यता पुरानो र रैथाने भएकाले यी प्रकृतिपूजक सबैभन्दा पुराना धर्मावलम्बी हुन् भन्न सकिन्छ । बोनवाद अर्थात् झाँक्रीवादको रूपमा हेर्दा विश्व मानवसभ्यता र संस्कृतिमा यसैलाई शमानिजम नामबाट जानिन्छ र यो नै संसारको पहिलो ‘धर्म ’ बन्न पुग्यो (प्रभात, ज्ञानबिन्दु ११ः १०७) ।
मलाई लागेको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने आधुनिक नेपाली समाज विशेष गरी ठूला सहरमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, नीति, आचार सबै क्रमशः लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । आधुनिकता छिरी नसकेको कर्णाली क्षेत्रमा १०औँ हजार वर्ष पुरानो धर्म–संस्कृति, संस्कार र रीतिथिति जीवित छन् । आधुनिक विकासको प्रवेशसँगै यिनको संरक्षणको अभियानमा जुट्न सक्ने हो भने इतिहासमा कर्णाली अब्बल भइरहनेछ । युरोपले आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार सबै गुमाएकाले पछुतो गर्दैछन् । उनीहरूले अहिले पछुताएझैँ, २–३ सय वर्षपछि नेपाली पछुताउन नपरोस् भनी अहिलेदेखि नै सचेत हुँदा के घाटा पर्छ र ?
कर्णाली क्षेत्रमा भेटिने धर्म–दर्शनमा माथि उल्लेख गरिएझैँ भूगोलको फैलावटअनुसार बोन, शाक्त, शैव, सनातनी हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन् । आजकल भने युरोपको धार्मिक संस्थाको प्रलोभनमा परी अन्य धर्मावलम्बी लुकिछिपी प्रवेश गर्दैछन् । तत्कालिक जिल्ला विकास समितिका वार्षिक प्रतिवेदनमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको मात्र विवरण दिए तापनि यो क्षेत्रमा बोन मार्गीको बाक्लो र उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । संसारमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका बोन दर्शन नेपालमा भने क्रियाशील छ ।
गहन पक्ष के हो भने मध्य–एसिया, पश्चिम–एसियामा तत्कालीन समयमा नै हजारौँ मानिसको हत्या हुँदा, दास बनाइँदा यो क्षेत्रमा यहाँका विभिन्न जातजाति एक पटक पनि झगडा नगरी बसे । माटो, रूखबिरुवा, ताल, नदी, पहाड, हिमाल, देउराली र भन्ज्याङलाई पूजे, माटाका मातृका बनाएर पूजे, योनि मात्रले हँुदैन भन्दै लिङ्गको पूजा गर्न थाले । पृथ्वीलाई पूज्ने हुनाले यहाँ विखण्डन कहिल्यै भएन; यो नेपालको ठूलो सम्पत्ति हो । केहि सय वर्षपहिले राजनैतिक पहिरनमा मन्दिर, गुम्बा, माने र चोर्तेनलाई खल्बल्याउन प्रयत्न गरियो, तर हिमाल नै खास अर्थमा स्वर्ग भएकोले त्यो विफल भयो । विशाल हिमालय क्षेत्रदेखि पश्चिममा किन शान्ति स्थापना हुन सकेन ? किनभने त्यहाँ कहिल्यै धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता त्यहाँको हावापानी र पखेरामा हुर्कन पाएन ।
कर्णालीको मानव सभ्यता, धर्म र संस्कृति हजारौँ वर्ष पुरानो हो । आजका दिनसम्म बोन, शाक्त, शैव, सनातनी हिन्दू र बौद्ध धर्म–दर्शन विभिन्न रूपमा कर्णालीको जनजीवनमा सांस्कृतिक धरोहर बनेर बसेको छ । कर्णालीको भौगोलिक फैलावटका आधारमा धर्म–दर्शन, जातजाति, संस्कृति, चाडपर्व, जन्म र मृत्यु संस्कार जोडिएर रहेका छन् । त्यसको प्रमाण गुम्बा, ख्यातिप्राप्त देवी मन्दिर, भैरव र शिवका मन्दिर, मष्टोका थान, धामी झाक्री, झारपूmक र पतुर्ने चलनबाट देख्न सकिन्छ ।
२.३ कर्णालीमा बोन धर्म–दर्शनको परम्परा
जन्म, मृत्यु, पानी, आकाश, आगो, पृथ्वी, हावा जे जति तŒव यो ब्रह्माण्डमा छन्, त्यो सत्य
हो । माटो, पानी, हावा, ताप नभई सृष्टि र सृजना हुँदैन । यो प्रकृति नै सबै कुरा हो, प्राकृतिक जीवित तŒव नै सृष्टिको आधार हो भन्ने विश्वास गरी प्रकृतिको पूजा गर्ने, पितृपूजा गर्ने, प्रकृतिको शरणमा जाने जुन चलन, परम्परा र संस्कृति छ त्यसलाई बोन परम्परा÷बोन धर्म÷बोन दर्शन भनिन्छ । मन, वचन, विवेक र बुद्धिको प्रयोग गरी प्रकृतिलाई खुसी पार्न सके वर्षा हुन्छ, खेति हुन्छ, सृष्टि हुन्छ र सन्तान वृद्धि भई सुख हुन्छ भन्ने विश्वास बोन धर्मावलम्बीको छ । प्रकृतिलाई खुसी पार्न विभिन्न किसिमका तरिका अपनाउने परम्परा, चलन र व्यवहारलाई बोनवाद पनि भनिन्छ । समस्याको समाधानका लागि झारफुक गर्ने, झाँक्री राख्ने बोन सम्प्रदायको परम्परा रहिआएको छ । बोनको सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थल मानसरोवर, कैलाश तथा नेपालको पश्चिम हिमाली क्षेत्र मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा र हुम्ला हो । नेपालबाहेक तिब्बत, भुटान र भारतको उत्तरी क्षेत्रमा पनि केहि बोन गुम्बा रहेका छन् ।
बोन पुरानो धर्म हो । यो मातृतन्त्रको काल वा त्यो भन्दा पहिलेदेखि अभ्यासमा आएको हो ? अध्ययनको विषय हो । सबैले स्वीकार गरेको के हो भने यो धर्म हिमाली महादेशमा जन्मेर हुर्केको सबैभन्दा पुरानो धर्म–दर्शन हो । यो धर्म पनि अन्य धर्मझैँ समय–समयमा कहिले सनातनी हिन्दू त कहिले बुद्ध धर्मको चेपुवामा परे तापनि नेपालको हिमाली क्षेत्र मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा आजका दिनसम्म उच्च प्रतिष्ठासहित रहेको छ । डोल्पाको रिङ्मो, पुङ्मा, काइगाउँ, खालीबोन, चेल्लुङ, दुनै, सिम्चे, द्योतराप, छार्का, स्यामलिङ र भिजेरमा पुराना बोन गुम्बा रहेका छन्, त्यहाँका लामा परिवारसँग बस्छन् ।
मानिसले खेतिपाती, पशुपालन र स्थायी किसिमको बसोबास, परिवार, सन्तान वृद्धि आदिको सुरुआत भएदेखि खेतबाट अन्न उब्जेको देखेपछि, जनावर र माताले बच्चा जन्माएको चाल पाएपछि सभ्य संस्कार, मान्यताको विकास र त्यसबारेमा चिन्तन–मनन गर्नसक्ने भएदेखि प्रकृतिको पूजा गर्न थालिएको हो ।
प्राकृतिक शक्तिको प्रतीक अथवा मानस बिम्बको रूपमा वनदेवी अथवा झाँक्री (वनैया) नामक काल्पनिक पात्र ठड्याएर सम्पूर्ण जगतको सृष्टि, पालन र संहारको नियम, विधि र ऊर्जा उनैसँग रहेको विश्वास गर्ने दृष्टिकोण झाँक्रीवाद हो यसैलाई बोन दर्शनको रूपमा समेत हेरिन्छ । ……. बोनवाद या झाँक्रीवाद समानार्थी भएर हाम्रो संस्कृति दर्शनमा प्रयोग भएको छ (प्रभात, ज्ञानबिन्दु ११ः९३–९४) । पछिल्लो समयमा अथर्ववेदमा बोन धर्मका तान्त्रिक विधि समावेश गरी झारफुक गर्दा ती मन्त्र प्रयोग गर्न थालियो । यसरी बोन धर्म हिमालदेखि उत्तर र दक्षिणसम्म फैलियो ।
बोनलाई बोन, पोन र सो धर्म मान्नेलाई बोन्पो भन्ने गरिन्छ । बोन धर्मावलम्बीका मुख्य धर्मगुरु बोनपा सेराव हुन् । बोन धर्मावलम्बीले जप्ने मन्त्र ‘ओम् मात्री मुये साले दु’ हो । बोन र अन्य धर्मावलम्बीले गर्ने सामान्य विधिबारे एउटा सानो विशेषता यसप्रकार छ ः बोन धर्मावलम्बीले कैलाश पर्वतको परिक्रमा गर्दा, माने घुमाउँदा, चोर्तेनको परिक्रमा गर्दा दाहिनेदेखि देब्रे अर्थात् घडीको सुईको उल्टो पारेर गर्दछन् भने हिन्दू, बौद्ध, जैन र अन्य सम्प्रदायले मुल गुम्बा वा मन्दिरलाई दाहिने पारेर वा घडीको सुईअनुसार घुम्दछन् ।
अहिले सहरमा बस्ने चलन बढेकाले कर्णालीका प्रायः सबै जिल्लामा सबै धर्म सम्प्रदायका मानिसको बसोबास रहेको छ । त्यसमध्ये डोल्पाको रिङमोलगायत अन्य थुप्रै गाउँका मानिस बोन धर्मावलम्बी हुन् बोन धर्म बौद्ध धर्मभन्दा पनि पुरानो हो । सातौँ शताब्दीअघि तिब्बतमा बोन धर्म
थियो । अहिले तिब्बतमा पनि बोन धर्म लोपोन्मुख अवस्थामा छ । बोन धर्म जीवित रूपमा रहेको ठाउँ नेपालको डोल्पो हो (पराजुली, २०७४ः७९) । विदेशी लेखकहरूले भनेजस्तो यहाँ पाइने धर्म र संस्कृति तिब्बती नभएर विशुद्ध डोल्पाली हो र यहाँका बासिन्दा विशुद्ध खस हुन् । बरु कर्णालीको प्रभाव तिब्बतसम्म पुगेको कुरा मानसरोवर, कैलाश, पार्वती कुण्ड, तीर्थपुरी, बज्रपानी पर्वत, मञ्जुश्री पर्वतजस्ता शब्दबाट नामकरण गरिनुबाट थाहा हुन्छ ।
प्रकृति नै यस क्षेत्रका मातापिता, अन्नदाता र भगवान् हुन् । त्यसैले कर्णालीबासी चाहे ती शैव, मष्टो, बोन, बौद्ध जे हुन् चाडबाड मनाउँदा बडो धुमधामका साथ हृदय खोलेर मनाउँछन् । उनीहरूको संस्कृतिमा प्रकृतिप्रतिको माया शेफोक्सुण्डो र राराको पानीजस्तै कञ्चन हुन्छ । प्रकृतिसँग नाता टुट्दो हो त किन आज पनि जुम्लामा रोपाइँ गर्दा दशैँ वा ल्होसार पर्व मनाउँदाभन्दा बढी महŒव दिई नाचगान गरिन्थ्यो ?
कर्णालीकोे सबैभन्दा बलियो पक्ष के भने शिलालेख लेख्दा होस् वा नयाँ कार्य गर्दा होस् बोन, हिन्दू र बौद्धमन्त्र राख्ने गर्नुले त्यसबेलाका मानिसले एकअर्कालाई कति सम्मान गर्थे भन्ने प्रष्ट हुन्छ । संघीयताको निर्माणको समयमा जाति र धर्मबारे विवाद ल्याई नेपाललाई टुक्रा पार्ने प्रयास समन्वय र सहअस्तित्वको भाव बोक्ने त्यहीँ पौराणिक संस्कृतिले बिफल तुल्याएको थियो । कर्णालीको संस्कृति र धर्म–दर्शनको बिर्सन नहुने अर्को बलियो पक्ष के हो भने यहाँको संस्कृति मानिसको रगत र मनमा मिसिएकै छ । दोर्जी रोकाया, छिरिङ मगर, कमल बैजीजस्ता नामबाट पनि त्यसको भाव र मर्म बुझ्न सकिन्छ । नागरिकबीचको सद्भाव आमसमाजमा प्रस्फुटन हुनेगरी गुम्बा, मन्दिर निर्माण गर्दा पनि झल्केको हुन्छ । यो सद्भाव सिकाउने अरु कोहि नभई कर्णाली हो र कर्णालीको पौराणिक धर्म–दर्शन हो । उदाहरणको लागि जुम्लाको चोप्रामा रहेको पेगोडा शैलीको चोर्तेन हो जुन पेगोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ र त्यसलाई मैले चोर्तेन्दिर भनी नामकरण गरेको छु ।
काराकोरम, काजकास्तान, मंगोलिया, तिब्बतदेखि हिमाली उपमहादेशमा फैलिएको बोन दर्शन नेपालको डोल्पाबाट सुरु भएको हो । अहिले पनि कर्णालीमा जीवित रहेको यो दर्शन र यससँग जोडिएका वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी प्रचलनलाई जोगाउन आवश्यक छ ।
२.४ कर्णालीमा शाक्त धर्म–दर्शनको परम्परा
बोन धर्म प्रकृति पूजासँग सम्बन्धित छ । बोनमा पनि पृथ्वीलाई माता मानेर पूजा गरिन्छ । मानव सभ्यताको विकासक्रमको एक चरण आदिम गणतन्त्रमा मातृका प्रमुख हुने समय थियो । महामातृका त्यसबेला गण प्रमुख हुन्थिन् । गण ठूलो भएपछि छुट्टिन्थे । पुत्रलाभपछि उनको भीमकाय मूर्ति
बनाइन्थ्यो । तन्त्र विधि अपनाइन्थ्यो । अन्न उमार्न, अन्नलाई पूर्ण गर्न पूजा गरिन्थ्यो । त्यो कुरा ५ हजार वर्षपहिले कैलाश पर्वतको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा गरिन्थ्यो । एलममा मातृका प्रधान हुँदा देवजनमा देव प्रमुख भएको कुरा मदनमणि दीक्षितको भूमिसूक्तमा वर्णन गरिएको छ ।
त्यसबेलाको समयमा मातृकाले पति चुन्ने र उनबाट पुत्रलाभ भएपछि पतिको रक्तबलि दिने चलन थियो । त्यसबेलाको त्यो शक्ति आराधनालाई क्रमशः देवी, महाशक्तिको रूपमा स्थापित गरियो । पछि पुराणका कथामा तिनलाई ‘अष्टमातृका’ ‘नवदुर्गा’ भनियो । हिमाली क्षेत्र उद्गमस्थल भएका जनजातिहरूमा अहिले पनि नारीको मर्यादा उच्च रहेको छ । नारी शक्तिलाई प्रमुख शक्ति मान्ने समुदायलाई शाक्त सम्प्रदाय भनिन थालियो र यो धेरै पुरानो परम्परा हो । ‘इरान, इराक, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, पश्चिम–एसिया र मोहनजोदाडो एवम् हडप्पा सभ्यताबाट प्राप्त नारीचित्र, मूर्ति र अवशेषबाट पनि शक्तिको उपसना परम्परा ज्यादै प्राचीन रहेको देखिन्छ (लामिछाने, २०७३ः८८ ) ।
नेपालमा मातृशक्तिको फैलावट ई.पू. ३००० पहिले सबै क्षेत्रमा थियो । त्यसको अवशेष विभिन्न देवी, दुर्गा, कालीको नाममा अहिलेसम्म पूजामा कायम छ । त्यसबेला अहिले चण्डी आदिमा उल्लेख गरिएझैँ महामाता नै सर्वशक्तिमान थिए । त्यस्तो चलन हजारौँ वर्षसम्म चल्यो । नेपालका आदिवासीमा त्यसको अवशेष अझै छ जुन कर्णालीका हिमाली जिल्लामा पाइन्छ । घरको खटनपटन अहिले पनि माताबाट हुन्छ । पितृसमाजको विकासपछि माताको अधिकार खोसिँदै मात्र गएन यौन दासीसमेत बनाइयो । अहिले देवी पूज्ने हाम्रो समाजमा महिलालाई दासकै रूपमा हेरिने ठाउँ पनि कर्णालीमा नै नभएको होइन, जुन जनकपुर क्षेत्रबाट प्रारम्भ भएको थियो ।
वैदिक ग्रन्थमा देवीलाई ज्ञान, धन, शक्ति आर्जन गर्ने, शत्रुबाट बचाउने, समाजलाई बाटो देखाउने र दुःखबाट बचाउने शक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ । महाभारत कालमा आइपुग्दा भने नारी शक्तिलाई आह्वान वा उपासना गरी नारी शक्ति आफूमा ग्रहण गर्न उपासना गर्न थालेको पाइन्छ । तर ठाउँअनुसार विकास र विधि फरक पर्दछ । जे होस् शक्तिको आराधना गर्ने दुर्गा, काली, चण्डी, महाकाली, कपिला, भद्रकाली देवीका रूपमा पूजा गर्ने चलन महाभारत कालदेखि बढी मात्रामा देखिन थालेको हो । नेपालमा देवीहरूको उल्लेख वैदिक ग्रन्थ, पुराण, उपनिषद्, स्वस्थानी व्रतकथाजस्तै अन्य धेरैमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालको पश्चिम तराईमा पर्ने बन्जाराहीको पुरातात्विक उत्खनन्मा हातले बनाइएको माटाको नारी मुखौटो मानेका छन् । सो मुखौटो ई.पू. तेह्रौँ शताब्दीको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ (लामीछाने, २०७३ः८८) । अंशुवर्माको पालादेखि भने राजाहरूले देवीहरूको स्थापना गरी पूज्न थालिएको पाइन्छ । मल्लकालमा शाक्त परम्पराले राष्ट्रिय रूप लिई सबै कोटमा दुर्गा भवानीको मूर्ति राखी सरकारी निकायबाट नै पूजाअर्चना गर्न थालियो ।
देवीपूजाको सम्बन्धमा कर्णालीतर्फ ध्यान दिँदा कर्णालीको माथिल्लो क्षेत्रमा ईश्वरवाद होइन कि उपासनाका विधिसहित व्यवहारिक रूपमा मातृपूजा गरिन्थ्यो । हिजोका दिनमा झैँ मातृशक्तिलाई आज पनि पूजा गरिन्छ । मनुस्मृतिमा वंश नाश हुने अवस्थामा बुहारी वा भाउजूसँग सम्बन्ध स्थापना गरी वंश नाश हुन नदिने संहिता छ भने हिमालयको काखमा मातृशक्ति स्वरूप आज पनि घरव्यवहार, परिवार, खेतिपाती, आर्थिक हिसाब र परिवारका सदस्य कसले के काम गर्ने भन्ने खटन सबैभन्दा जेठो महिला सदस्यबाट हुन्छ । अवस्था हेरी, व्यवहारिक रूपमा जग्गालाई चीरा पार्न नदिन वंश परम्परालाई जीवित राख्न बहुपति प्रथा पनि कुनै–कुनै क्षेत्रमा प्रचलनमा छ । व्यवस्थित कृषि–पशुपालनको युग, कम्तिमा १० हजार वर्ष पहिलेको मातृशक्तिको परम्परा कर्णालीमा जीवित छ ।
कर्णालीको तल्लो भेगमा देवी पूजा उत्तिकै सशक्त छ । नौ देवीहरू डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीबाट उत्पन्न भएको भन्ने विश्वास छ । स्थानीयको विश्वासअनुसार हाल त्रिपुरासुन्दरी भएको ठाउँमा ओखल थियो । ओखलमा धान कुट्दा कहिले धेरै कहिले थोरै चामल हुने भएकाले खनेर हेर्दा तामाका भाँडाहरू भेटिए । खन्दा आएको आवाजले कुडेसोमाथि देखिएका नौ वटा पुतली देवीका रूपमा उडेर माथि आए । ती नौ बहिनी पुतलीहरू बाला, त्रिपुरा, सुन्दरी, मालिका, काली, बागीश्वरी, कनकसुन्दरी, बडीमालिका र त्रिपुरासुन्दरी हुन् । बाला, त्रिपुरा, सुन्दरी र मालिका डोल्पामा, काली सल्यानको खैरावान, बागीश्वरी नेपालगन्ज, कनकसुन्दरी जुम्ला, त्रिपुरासुन्दरी बैतडी र बडीमालिका बाजुरामा बसे भन्ने विश्वास अहिलेसम्म रहेको छ (पराजुली, २०७४ः११३) । त्यसरी नै जुम्ला सिँजाकी कनकासुन्दरी, कालीकोटकी बडिमालिका, पुगमालिका, चुलीमालिका अन्य देवी मन्दिर हुन् ।
खस साम्राज्यको बेला बोन, बुद्ध वा सनातनी हिन्दू धर्म जसले जुनसुकै सम्प्रदायमा आस्था राखे तापनि आस्थाअनुसार गुम्बा, देवीमन्दिर स्थापना गरिदिए । त्यसैले सबै भेगमा देवीपूजा वा मातृपूजा, बोन, शैव, बुद्धसँग सम्बन्धित धर्म परम्परा उत्तिकै प्रभावकारी रहेको पाइन्छ । यस क्षेत्रको पदयात्रा गर्दा मातृशक्तिको श्र्रद्धाभावले पूजा गर्ने गरे तापनि कर्णालीमा नारीको अवस्था भने अत्यन्त कष्टकर छ । धेरै देवीले अहिले १४ घण्टा काम गर्छिन्, सन्तान जन्माउँछिन्, भोकोपेटलाई पटुकीले कस्छिन् र अल्पायुमा कर्णालीको तीरमा विश्राम लिन्छिन् ।
हामीले बिर्सन नहुने कर्णालीको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने नाममा चाहे बोन, झाँक्री, शाक्त, शैव, बौद्ध, तन्त्र, मन्त्र जे हुन निष्कर्षमा प्रकृति एवं मातृपूजक हुन् र एकअर्कामा मिसिएर रहेका छन् । यस प्रकारको प्रचलन सुदुरपश्चिममा पनि रहेको छ । यहाँ बस्ने खस जाति यी माथिका सबै धर्म परम्परामा सरिक हुन्छन् –भौगोलिक फैलावटअनुसार । काठमाडौँ उपत्यकामा शक्तिपूजा र तान्त्रिक जात्राको प्रचलन अन्यत्रभन्दा सशक्त रहेको छ ।
२.५ कर्णालीमा शैव धर्म–दर्शनको परम्परा
शैव संस्कृति हिमाली भूभागमा विकास भएको हो भन्ने विश्वास गरिएको छ । शैव दर्शनभित्र रहेका तन्त्र, योग, नाट्य, संगीतको उद्गमस्थल नेपाल हो भनेर बल्ल कुरा उठ्न थालेको छ । शिवपार्वतीले विकास गरेका संस्कृति तन्त्र, योग, नाटक, जडीबुटीका औषधि, वर्ण व्यवस्थाविहीन समाजका अवशेष कर्णाली क्षेत्रका उच्च क्षेत्रमा अहिले पनि छ । गोठ सार्दै चौरी र भेडाच्याङ्ग्रा पाल्ने, लेक र बेसी गर्ने चलन यथावत छ । शैव संस्कृतिले पृथ्वीलाई प्रमुख स्थान दिएको छ र मृत्युपछि कुनै काल्पनिक लोकमा पुग्ने हैन, कैलाशवासी शिवशक्तिमा समाहित हुने कामना गर्दछ । यो संस्कृति हिमालदेखि फैलिएर दक्षिण भारतसम्म पुगेको छ । वैदिक कालभन्दा पहिले नै यहाँ विकसित शैव संस्कृति ई.पू. ३००० वर्षतिर नै विशाल क्षेत्रमा फैलिएको थियो (प्रश्रित, २०७४ः २०) ।
कर्णाली क्षेत्रमा शैव धर्म–दर्शन र शैव संस्कृतिको प्रभाव माथिल्लो कर्णाली र तल्लो कर्णाली दुवै क्षेत्रमा रहेको छ । समुद्रसतहदेखि ३००० मिटरको उचाइमा बसोबास गर्ने बासिन्दा बोन वा बुद्ध धर्मावलम्बी भए तापनि तिनीहरूको दैनिक व्यवहारमा शैव संस्कृतिका तन्त्र, मन्त्र, मातृपूजा प्रचलनमा छन् । त्यसैगरी तल्लो क्षेत्रमा शिवका अंश मानिने मष्टोलाई कुल देवताको रूपमा प्रत्येक घरमा थान बनाई पूज्ने गरिन्छ । विभिन्न नामका मष्टो हुने र पूजाका विधि फरक भए तापनि खस जातिको कुल देवता मष्टो हुन् ।
पछिल्लो समय मिथिला क्षेत्रमा याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, गार्गी आदिले ऋग्वेददेखि उपनिषदको सिर्जना गरे । नारायणीको त्रिवेणीधामको वाल्मीकि आश्रममा वाल्मीकिले रामायणको रचना गरे । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने मिथिलामा वैदिक संस्कृतिको विकास हुनुभन्दा पहिले कर्णालीदेखि पश्चिममा केदारसम्म, पूर्वमा बाग्मती र गौरी–शङ्कर हिमालसम्म शैव संस्कृतिको विकास भइसकेको थियो । शैव दर्शनको विकास हुनुभन्दा पहिले बोन दर्शनको विकास भइसकेकाले यो क्षेत्रमा दसौँ हजार वर्ष पहिलेदेखि मानिसको बसोबास थियो भन्न सकिन्छ ।
शैव धर्म शिव र शक्तिसँग सम्बन्धित छ । सिन्धु सभ्यताको विकास हुनुभन्दा पहिलेदेखि पामिर, हिन्दूकुश, काराकोरमदेखि मुख्य हिमालयको पूर्वीभाग र मध्य–एसियामा प्रकृतिपूजक, मातृपूजक रैथाने सम्प्रदायको बसोबास थियो । पश्चिमबाट आर्यहरूको आगमनभन्दा हजारौँ वर्षपहिले अग्ला पर्वतमाला र हिमालयको सेरोफेरो जसलाई विख्यात लेखक मदनमणि दीक्षितले हिमाली उपमहादिप भन्नुभएको छ, त्यस क्षेत्रमा मानव सभ्यताको विकास भएको हो । कृषि, पशुपालन, घर निर्माण, भाँडाकुडा र औजारको विकास गरेका थिए । आजका स्थापनाअनुसार द्रविणजन सिन्धुनदीको पश्चिमको बुचिस्तानका नवपाषाणयुगीन आदिवासीहरूले नै इक्षु र वंक्षु नदी सरदरिया, अक्ससका मैदान र पर्वतबाट बसाईसराईद्वारा सिन्धु सभ्यताको विकास निम्ति जग हाले । ……४८ सय वर्ष पहिले हडप्पा सभ्यता अनि त्यसको केहि शताब्दीपछि मोहे–जो–डेरो, कालीबङ्गा, लोथार चन्हुदडो आदिका विकास भए (दीक्षित, २०५९ः१५५–१५६) । त्यसैबेलादेखि नै कैलाश पूज्ने, महामातृका पूज्ने, योनि र लिङ्ग पूज्ने गर्दथे । महामातृकाको विशाल मूर्ति बनाएर रक्तबलि दिन्थे । जे देखिन्छ र भोगिन्छ त्यो यथार्थ हो । यो प्रकृतिले जे दिएको छ त्यो सत्य हो भन्नेमा विश्वास राख्दथे । पशुपति आर्यघाटमा रहेको विरूपाक्षको मूर्ति र गौरीघाटभन्दा माथि रहेको किराँतेश्वर शिवलिङ्ग रहेको आधारमा ई.पू प्रथम शताब्दीतिर नै नेपालमा शैव धर्म लोकप्रिय भइसकेको देखिन्छ (लामिछाने, २०७३ः६७) । अहिले नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा पशुपतिलाई विभिन्न नाममा पूजा गर्ने गरिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि शिव पूजिन्छन् ।
तन्त्रको आविष्कारक शिव मानिन्छन् । शिव र शक्ति एक ठाउँमा रहन्छन् । शिवको मूल विशेषता तन्त्र हो । त्यसैबाट शैव दर्शनको विकास भयो । यिनी बढी समन्वयकारी, उदारभाव, सहयोगीका रूपमा मानिन्छन् । ऋग्वैदिक कालमा शिवलाई निन्दा गरी लिङ्गपूजक, लिङ्गोपासक भनियो । यजुर्वेदमा शिवको प्रभावकारिता, मिलनसारिता, सहयोगी भावले गर्दा उनलाई रुद्रको रूपमा रुद्राध्याय थपियो, रुद्राविषेक गरियो र ब्रह्मवादी दर्शन र शिवलाई मिलाएर याज्ञवल्क्य (जनकपुर) ले यजुर्वेद लेखे । यजुर्वेदले रुद्रलाई शिव भनी उल्लेख गरेको छ । शैव धर्मावलम्बीले शिवलाई सम्पूर्ण जगत्को सृष्टि र संहारकर्ताको रूपमा हेर्दछन् । त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको धारणा त्यसैबेलादेखि भएको हो । यजुर्वेदकालमा तन्त्रबाट मन्त्र हँुदै यसैबाट किराँतेश्वर भए भने त्यसैमा शैव र विष्णुको संस्कृतिलाई विकास गर्दै विस्तार गरे ।
याज्ञवल्क्यदेखि शङ्कराचार्यसम्म आइपुग्दा सबै आत्मवादी हुन पुगे, ‘ब्रह्म् सत्यम् जगत मिथ्या’ भने । दार्शनिक विष्णु प्रभातका अनुसार– ‘आठौँ शताब्दीमा राजा सुधन्वाले सेनाको टुकडी नै सहयोग गरी शङ्कराचार्यको नेतृत्वमा ईश्वर नमान्नेलाई मार्न लगाए, ८४ हजार बौद्ध ग्रन्थ जलाए ।’ सनातनी हिन्दूका इन्द्रिय दमन, सहयोग (दान र दया) त्यसबेला साँचो अर्थमा र व्यवहारमा थियो, त्यो नष्ट
भयो । त्यसै बेलादेखि दास बनाउने र छुवाछुत हुनेसम्म गरियो । त्यसैले बुद्धले समानता र छुवाछुतरहित समाजको वकालत गरे । आत्मवाद एवम् ईश्वरवादको विरोध त भयो तर हिन्दू सनातनी कर्मकाण्डीबाट मुक्त हुन सकेन । प्राकृतिक शक्ति, परिवर्तनशीलता र यथार्थताको जानकारी दिए तापनि ईश्वरवादको प्रभाव व्यापक भयो र जुनसुकै धर्म मान्ने भए तापनि प्रकृति आफैँ केहि होइन यो अलौकिक शक्तिबाट प्राप्त भएको हो, हाम्रो जीवन उनैको हो, हिजोको हाम्रो दानले आज यत्तिका भएका छौँ, आज दान गरे भोलिको जीवन स्वर्गमा हुन्छ भन्ने कुराले समग्रमा जित्यो । त्यो मानवको गर्भाधारणसँगै संस्कारगत हिसाबले जन्मेर आयो । वैज्ञानिक धारणा पाठ्यक्रममा नराखिएकाले पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा अहिले पनि ९९ प्रतिशत मानिसले विश्वास गर्छन् ।
समन्वयात्मक भाव धार हिमाली संस्कृति हो जहाँ विभिन्न धर्म र परम्परा एकअर्कामा मिलेर बसेका हुन्छन् । यथार्थलाई विश्वास गर्ने बोन र शैव धर्म, यससँग सम्बन्धित संस्कृति र परम्परा हिमाली उपमहादिपको कर्णालीमा जन्मेको हो । कर्णालीको हुम्लाको नालाकांकार भन्ज्याङको ठीक उत्तरमा कैलाश पर्वत विराजमान छ जसको आसपास शिव, कुवेरको दरबार रहेको कुरा महाभारतमा उल्लेख छ । अष्टावक्र यहीँ बाटो भएर कैलाश गएका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालमा मल्लकालमा सबै क्षेत्रमा विकास हुँदा उमामहेश्वर, भैरवपूजा गर्न थालिएको देखिन्छ । उमामहेश्वरको मूर्तिमा यौनिकपन झल्केको देखिन्छ जुन तन्त्रसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा शक्तिका साथै शिवका सौम्य र उग्र रूपको उपासना भैरवस्वरूपलाई मानेर गरिन्छ । हिमाली शेर्पाका कुलदेवता, द्रबिड, पासवान र झाँगडका इष्ट देवता, खसका मष्टो नेवारका भैरव विभिन्न रूपमा कुल देवता नै हुन् । सिन्धु सभ्यताका इतिहासविद् जोन मार्शलले शैव धर्मलाई ‘हाम्रो लागि मोहनजोदाडो र हडप्पाले सँगालेका धेरै ढुकुटी मध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो शिव धर्मको इतिहास । यो ताम्र युगदेखि चलेको हो । विश्वमा जीवित सबै धर्ममध्ये यो सबभन्दा पुरानो हो ।’ भनेका छन् (प्रश्रित, २०७४ः ९५) । बोनजस्तै हिमाली क्षेत्र शैव संस्कृति र दर्शन विकासको मूल थलो हो र यो हिमालबाट हिन्द महासागरसम्म पुगेको हो ।
दैलेखको ज्वालानाभिस्थानमा रहेको भैरव मन्दिर, जाजरकोटको खलङ्गामा रहेको शिवालय, जुम्लाको भैरवनाथ, ढोका भैरव, चन्दननाथ र अन्य शिवालय यहाँ प्रख्यात छन् । कर्णालीमा जन्म, मृत्यु, पूर्वजन्म र पुनर्जन्मका विषयमा विश्वास रहे तापनि कैयौँ प्रचलनमा समन्वय यथावत् छ त्यो– बोन र शैवको प्रभाव हो । अहिले पनि कर्णालीमा बोन, शैव, शाक्त, बौद्ध धर्म–दर्शन र संस्कृति मिश्रित छ, जस्को चर्चा यहाँ गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विष्णुको क्षेत्र भनेर कालीगण्डकीको क्षेत्र दामोदर कुण्डदेखि मुक्तिनाथ, कागबेनी, गलेश्वर, रीणि, देवघाट हुँदै त्रिवेणी र त्यसआसपासको क्षेत्रमा व्यापक छ भने शैव धर्म अर्थात् उमामहेश्वरको प्रभाव शिव, भैरव, किराँतेश्वर, पशुपति, विभिन्न नाममा देवी र मातृकाको नाममा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विस्तार भई नै रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा भने नेपालमा फेरि एकपटक धार्मिक हमला भित्रभित्रै राजनैतिक स्वार्थका लागि भएको छ, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ ।
२.६ कर्णालीमा बौद्ध धर्मको परम्परा
नेपाल प्राचीन मातृपूजक एवम् प्रकृतिपूजकको भूमि हो । सभ्यताको विकाससँगै धर्म र संस्कृतिमा सुधार हँुदै गयो । प्रकृतिपूजक बोन सम्प्रदाय हिमाली क्षेत्रमा विकसित मध्य–एसियासम्म पुग्यो भने शैव दर्शनका उमामहेश्वर विभिन्न नाममा हिमालयदेखि दक्षिण सागरसम्म पुगे । यी दुवै दर्शन नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भएको हो । परिवर्तनशील जगतको चरणबद्ध विकाससँगै जीवनका सबै पीडाबाट मानवजीवनलाई मोक्ष दिने धार समातेर विश्वलाई नयाँ दर्शन दिए सिद्धार्थ गौतम बुद्धले । गौतम बुद्ध
(५६३–४८३ ई.पू.) नेपालकै लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् । आज नेपाल विश्वभर धार्मिक र जातीय सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधतासँगै एकता, प्राकृतिक सुन्दरता र सगरमाथा भएको मुलुक भनेर चिनिएझैँ शान्ति र सद्भावको सन्देश फुक्ने गौतम बुद्धको जन्मस्थल भनेर पनि चिनिएको छ । सबैलाई राम्रो गर, नराम्रो कसैलाई नगर भन्ने बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरी मानव कल्याणका दार्शनिक बने । आज विश्वका धेरै देशमा बुद्धका सिद्धान्तलाई आफ्नै परिवेशमा ढालेर बुद्ध धर्मको विस्तार गरिएको छ । बुद्ध आफैँले आफूलाई ईश्वर नमान्नु भने पनि उनलाई भगवान् नै मान्दछन् । बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने सम्राट अशोकले उनलाई महाज्ञानी भनेका छन् (प्रभात, २०७२ः१०३) । अशोकका पालादेखि बौद्ध धर्म यस हिमाली उपमहाद्विपदेखि बाहिर फैलिन थालेको हो । कर्णाली क्षेत्रमा बुद्धधर्मको विस्तार आठौँ शताब्दीदेखि हुन थालेको हो ।
तिब्बतमा सातौँ शताब्दीसम्म बोन धर्म नै त्यहाँको राजधर्म थियो । स्रङचङ गम्पोले सातौँ शताब्दीमा नेपालकी चेली भृकुटीसँग विवाह गरेपछि नेपालबाट बुद्धका मूर्ति मात्र लिएर गएनन् । नेपालबाट कालिगढ झिकाई तिब्बती जनतालाई मूर्ति बनाउन तालिमसमेत दिए । त्यसैगरी स्रङचङ गम्पोले तिब्बतबाट आफ्ना नागरिकलाई मूर्तिकला, भित्तेचित्र लेखन र बुद्ध धर्मबारे ज्ञान हासिल गर्न नेपाल पठाएका थिए । पोताला दरबार, नोर्बुलिङ्खा र जोखाङ मान्दिरमा भएका काँसढलौटका मूर्तिहरू नेपालबाट त्यसबेला ल्याइएका थिए (पराजुली, २०७२ः१६३) । त्यसरी तिब्बत, चीनमा बुद्ध धर्मको सुरुआत नेपालबाट भएको हो । सन् ९७० को आसपास पश्चिम तिब्बतका राजा यशि–ओ ले अतिसाको सहयोग लिई बुद्ध धर्मको विस्तार गरेका हुन् । पद्मसम्भव र अतिसा नेपालको कालीगण्डकीको बाटो भएर तिब्बत गएका हुन्, नेपालको हिमाली क्षेत्र र तिब्बतमा बुद्ध धर्मको विस्तार गर्न उनीहरूको भूमिका रहेको छ ।
बुद्धको मुल दर्शन सत्य र यथार्थमा आधारित छ । जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बुद्धभन्दा पहिलेका कपिलमुनि र भृगु महर्षिले गरेका थिए । बुद्ध उनीहरूबाट प्रभावित थिए । मानवलाई सदाको लागि शान्ति र सुख दिएर निर्वाण प्राप्त गर्ने बाटोमा हिँडन प्रेरित गर्ने उनले दरबार र परिवार त्यागे । जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कर्मकाण्डको हैकम र बहुपत्नी राख्ने चलनको विरोध गरी समतामुखी मानवीय चिन्तनको रूपमा बुद्धले नयाँ धारणा ल्याए र त्यो धारणा आज विश्वभर फैलिएको छ ।
सृष्टि र विनाश नियमित प्रक्रिया हो र संसार परिवर्तनशील छ । जन्म र मृत्युजस्तै प्रकृतिमा हुने परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हो । मानवजीवन सबैभन्दा ठूलो हो । उनले ‘मानवभन्दा माथि कुनै प्राणी छैन, भगवान् या ईश्वर जे भने पनि ती मानवकै सर्वकल्याणकारी रूप हुन्’ भनेर अनिश्वरवादलाई स्थापित मात्र गरेनन् बरु मानववादलाई अघि सारे (प्रभात, २०७२ः११०) । बुद्धका अनुसार मनले नै मानिसलाई देवता र पशु गराउने गर्दछ । असल मानिस नै देवता हो समग्र सृष्टिको यात्रा मानिससँगै जोडिएर आएको छ । ईश्वर कल्पनाको भ्रमजाल हो (प्रभात, २०७२ः११२) ।
बुद्धभन्दा पहिले आदिकालदेखि नै हिमालयको दक्षिणी भूभाग मानव सभ्यताको विकासको अग्रणी थियो । एकअर्कासँग परस्परमा मिलेर बस्ने, भूमि र पितृ पूज्ने, विभिन्न वर्ग, समुदाय, जातजतिबीचको सद्भाव र समन्वय बुद्ध जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै थियो । तर जब अलौकिक शक्तिले यो संसार थामेको छ, यो ब्रह्माण्डको सृष्टि अदृश्य शक्तिले गरेको हो भन्ने दर्शनको व्यापकता हुन थाल्यो त्यसपछि जगतलाई यथार्थ र साँचो अर्थमा बुझ्नुपर्छ भनेर बुद्धले वैज्ञानिक बाटो अङ्गीकार गरे । अलौकिक शक्तिको पूजा गर्नेले पछिल्लो समयमा मानिसले उनलाई नै ईश्वरको रूपमा मान्ने बनाए । तापनि उनको मूल सन्देश विश्वभर शान्तिको धार बनेर फैलिइरहेको छ । बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुनाले पनि यसको महŒव झन् बढेर जानु स्वभाविक हो ।
कर्णालीको सिँजा खस साम्राज्यको राजधानी भएको बेलामा सबै प्रकारका धर्म र सम्प्रदायलाई सम्मान गरिन्थ्यो । त्यसबेलाका राजाले कर्णाली क्षेत्रका कालीकोट, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, रुकुम, सुर्खेत, पुराङ (हाल तिब्बत, चीनको)मा राज्यकोशबाट सहयोग गरी बौद्ध गुम्बा निर्माण गर्न लगाएका थिए । कर्णालीका सबै जिल्लामा नयाँ–पुराना सबै किसिमका गुम्बा रहेका छन् । त्यसबेला बौद्ध धर्म–दर्शनको प्रचार व्यापक भएकाले बोन धर्मावलम्बीले अवलम्बन गरेका तन्त्रमन्त्रलाई अङ्गीकार गरी बौद्ध धर्ममा समावेश गरे । राजकीय धर्मको रूपमा बौद्ध धर्मलाई मानेका खस राजाहरूको शासनकालमा कर्णाली प्रदेशमा बौद्ध धर्मको उत्थान चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो (अधिकारी, असोज–कात्तिक २०७४ः१०४) । आज पनि सनातनी हिन्दूका शिवालय, देवी मन्दिर, मष्टोका थानभन्दा धेरै गुणा गुम्बाहरू कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देख्न पाइन्छ जुन दुई हजार वर्षभन्दा पुराना छन् । तर गुम्बामा रहेका अधिकांश पुराना मूर्तिहरू केहि चोरी भए भने केहि विदेशीले लगे । भित्तेचित्र, थाङकाचित्र र चोर्तेनको भित्री भागमा रहेका भित्तेचित्र खुइलिएर लोप हुँदैछन् । ती चित्रहरू हजारौँ वर्ष पुराना हुन् र स्थानीय माटो र जडीबुटीबाट रङ बनाई बनाएका हुन् ।
हिमाली काखमा मात्र नभई त्यसबेलाका राजाले बुद्ध विहार र मन्दिर दक्षिणका मुख्य स्थानमा निर्माण गरेका थिए । सुर्खेतमा बाह्रौँ शताब्दीमा बनाइएको काक्रेविहार त्यसको उदाहरण हो । रिपु मल्लको समय वि.सं. १३७० मा अभिसमयालङ्कार नामक बौद्ध ग्रन्थको प्रतिलिपि सारिएको ठाउँ सुर्खेत उल्लेख भएकाले अशोक चल्लको राज्यकालतिर उक्त विहार बनाइएको हुनसक्ने अनुमान इतिहासकारहरूको छ (प्रभात, प्रज्ञा संस्कृत कोष, २०७४ः९८) । पचासको दशकमा म सुर्खेत पुग्दा त्यहाँ रहेका बुद्ध, लोकेश्वर, ध्यानिबुद्ध, मृग, हात्ती आदिका मूर्ति र तोरण वनभरि छरिएको र त्यसैमाथि बसेर मानिसले दिसा गरेको देखेको थिएँ । संरक्षणका लागि समाचार सम्प्रेषण गरियो । आज, खुसीको कुरा के भने पुरातत्व विभागले त्यसको मर्म पहिचान गरी शिखर शैलीमा काक्रे विहारको पुननिर्माण गर्दैछ ।
कर्णालीका मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बुद्ध धर्मको विशेष प्रभाव छ । मैले सोलुखुम्बुदेखि लम्जुङको बेसी शहर हुँदै मनाङको फू र नार गाउँ, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड, माथिल्लो मुस्ताङ, रुकुम, माथिल्लो डोल्पा, मुगुको अन्तिम गाउँ मुगुम, जुम्ला, सिँजा, कालीकोट हँुदै हुम्लाको सिमिकोटदेखि हिल्सा, पुराङ, मानसरोवर र कैलाश परिक्रमा गर्दै ल्हासासम्म पुग्दा बोन, शाक्त, शैवदेखि बुद्ध धर्म एकअर्कामा घोलिएर जीवनमा समाहित भई एउटै रूपमा उभिएको भएको भेटेको छु । कर्णालीका देवल, मन्दिरमा बोन, बौद्ध र वेदका मन्त्र शिलालेखको शिरमा देख्न सकिन्छ । धेरै विदेशी र नेपाली दर्शनशास्त्री तथा समाजशास्त्रीले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेका धर्म संस्कृति र त्यहाँको परम्परालाई तिब्बती भनेका छन् । त्यो गलत हो भन्ने मेरो बलियो धारणा रहेको छ । त्यसमा पनि खास गरी कर्णाली क्षेत्र पूर्वमा त्रिशुली, दक्षिणमा तराई र पश्चिममा लद्दाक, पामिर, काजकास्तान र उत्तरमा कैलाशसम्म हिमाली धर्म (बोन, शाक्त, शैव) र संस्कृति फैलाउने केन्द्र कर्णाली नै हो भन्ने मेरो धारणा छ । बोन धर्मको सुरु नै डोल्पामा भएको हो भन्नेमा धेरैको मत रहेको छ ।
जर्ज बि. सेल्लरको पुस्तकको आधारमा पिटर माथिसनले आफनो पुस्तक द स्नो लियोपार्डमा शे गुम्बाभित्र भएका विषयवस्तुलाई यसरी दिएको भनी उल्लेख गरेका छन् ः ‘गुम्बाभित्र कलात्मक बुद्धका थुप्रै मूर्तिहरू, झुण्डिएका ढोलक, ड्रम, तरवार, ठूला छपाइका ब्लक रहेका छन् । त्यसबाहेक त्यहाँ एउटा कपडा–थाङ्का झुन्डिएको थियो जसमा एउटा ब्वाँसो, तिब्बती जङ्गली गधा, लाटोकोसेरो र पोथी यतीको चित्र थियो (ःबततजष्भककभल, ज्ञढठढस् द्दघद्ध) ।
सन् २०१४ मा म त्यहाँ पुग्दा पुराना कुरा केहि देखिनँ । चोर्तेनको चार कुनामा हात्ती, घोडा, मयुर र गरुड हुनु, चारकुने भाग पृथ्वी, त्यसमाथिको सेतो गुम्बज अण्डाकार भाग पानी, त्यसमाथिको शिखर आगो, अर्ध गोलाकार भाग हावा र अन्तिम शिखर आकाश अन्तरिक्ष । सनातनी हिन्दूका वैदिक धर्मग्रन्थ र व्यवहारिक चलनमा पृथ्वी, जल, अग्नि, हावा र आकाशलाई मुल पञ्चतŒव मान्नुमा समानताको अर्को उदाहरण एवम् कर्णालीमा भएको धर्म संस्कृतिको सम्मिश्रणको यो प्रमाण हो । (पराजुली, २०७४ः१५८) ।
कर्णाली नेपालको मात्र नभई भारत, चीन, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, जापानको तीर्थस्थल हो भने हामीले खोज गर्न सक्यौँ भने काजकास्तान र मंगोलियाले पनि यो क्षेत्रलाई तीर्थ मान्नुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रमा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि कृषि र पशुपालन भएको, पशुपालक घुमन्ते भएकाले पश्चिम र मध्य–एसियाको संस्कृति, जन्म, मृत्यु, विवाह संस्कार हाम्रोसँग मिल्छन् ।
कर्णाली प्रदेश शैव (मष्टो, लिङ्ग पूजा, देवी पूजा) बोन र बुद्ध धर्म–दर्शन र त्यससँग नजिकका संस्कृतिको जननी हुन सक्नुको प्रमाण हाम्रो भूगोल हो । हाम्रोमा भएको प्रकृति, हावापानी र भौगोलिक फैलावट, खेतियोग्य भूमि, ठूला पाटन र चरनका लेक र खर्क अन्यत्रका भन्दा सहज र बस्न योग्य भएकाले यो सम्भव भयो । सबै धर्म र सम्प्रदायका विभिन्न जात, जनजाति धर्मको नाममा विभाजन होइन कि एउटै माला बनेर बसेको पाइन्छ ।
कर्णाली क्षेत्रमा महाभारतकालीन भग्नावशेषको चर्चा सिँजा उपत्यका, दैलेख, सल्यान र रामकालीन चर्चा जुम्लामा कथाको रूपमा भएको छ तर प्रमाणित आधार प्राप्त भएका छैनन् । तर मानव बसोबास प्रकृतिपूजा, योनि र लिङ्गपूजा, मष्टो एवं बोन धर्मको परम्परा सिन्धु सभ्यताभन्दा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि थियो । कर्णालीमा बौद्ध धर्मको विस्तार र विकास भने खस साम्राज्यको बेला भएको हो । अहिलेको अवस्थामा धेरै बोन गुम्बाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । बौद्धगुम्बाहरूबाट चोरी भएका पुरातात्विक महŒवका वस्तु खोज गरी फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ भने भित्तेचित्रको संरक्षण गर्न पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ । चीनको तिब्बतमा साँस्कृतिक क्रान्तिको समय फालिएका मूर्ति र पोतिएका भित्तेचित्रको पुनर्निर्माण र पुनर्लेखन गरी संरक्षण गरेझँै बचाउन सके कर्णालीको सुन्दरतामा झन आकर्षण थपिनेछ । अब स्थानीय सरकारले त्यो जिम्मा लिनुपर्छ ।
३. विदेशीको आँखामा कर्णाली
मैले मेरो पुस्तक ‘डोल्पोः विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय’ मा विदेशी लेखकले भनेका केहि प्रसङ्ग उठाएको थिएँ । तिनीहरूको भनाईले कर्णालीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने लागेको हुनाले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
(क) अमेरिकी पदयात्री फिलिप स्टरजनले डोल्पोलाई संसारका उच्च हिमाच्छादित पहाडले घेरिएको, पैदलयात्रा गरी संसारकै सबैभन्दा अग्ला भन्ज्याङलाई पार गरेर मात्र त्यहाँ पुग्न सकिने भएकाले भित्री डोल्पोलाई साङ्ग्रिला भनेर दावी गर्न सकिन्छ (स्टरजन, १९९८ः२१६) । त्यसरी नै शेफोक्सुण्डो ताललाई उनले– ‘यो तालको पानी मैले अमेरिका, क्यानाडा, युरोप र साइबेरियामा रहेको संसारको गहिरो वैकाल तालमा देखेको पानीभन्दा पनि नीलो थियो’ (ऐ. पृ.२२१) ।
(ख) डोल्पोको भाषा, धर्म र संस्कृति तिब्बतीभन्दा फरक छैन् (बाउर, २००४ःपृ.६१) । त्यसलाई मैले सरासर सेतो झुट हो भनी प्रमाणसहित डोल्पो पुस्तकमा खण्डन गरेको छु ।
(ग) पिटर माथिसनले शेफोक्सुण्डो तालबाट बगेर आएको खोलालाई ‘माथिल्लो सुलीगाडजस्तो सुन्दर नदी पृथ्वीमा सायदै होला । ’ भनस् चर्चा गरेका छन् ।
त्यसरीने शेफोक्सुण्डो ताललाई उनले ‘तालको गाढा नीलोपन बौद्धमन्त्र ओम मणि पद्मे हुँ भित्रको मणि हो जसको अनन्त अर्थ आरम्भदेखिको शुद्ध जगत्को अविनाशी तŒव भनेझैँ यो ताल प्रकृतिको अद्भूत देन हो । यसमा जीवनको निर्वाण प्राप्तिका गुणहरू अनन्तसम्म सन्तोषपूर्वक स्वार्थहीन र शुद्ध रहेका छन् ।’
(घ) नेपालको डोल्पोको बोन–पो धर्मबारे अध्ययन गरी यसबारे पहिलो पटक विश्वलाई जानकारी दिने विदेशी लेखक डेभिड स्नेल्ग्रोभले शेफोक्सुण्डो तालमा पुगेपछि यसरी वर्णन गरेका छन् ः ‘पानीको किनारा चाँदीजस्तो टल्कने भोजपत्रको बनेको छ अनि पानीको अलौकिक नीलो रङको पृष्ठभूमिमा हाँगामा चमचम गर्दै चम्किने सेतोपना मैले जानेमध्ये सबैभन्दा स्वर्गीय आनन्द दिने वस्तु हो ।’
प्राकृतिक सौन्दर्यता, मानव सभ्यता, बोन, शाक्त र शैव दर्शन, ती दर्शनसँग जोडिएका प्रकृतिपूजा, देवीपूजा, मष्टोपूजा, मूर्तिपूजा र संस्कृतिमा कर्णाली बिछट्टै धनी छ । धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणको दृष्टिकोणमा कर्णाली कमजोर छ । हजारौँ वर्ष पुराना देवीका मन्दिर, मष्टोका थान, बोन र बौद्ध गुम्बाहरू निमोनिया भएको वृद्ध रोगीको अवस्थामा छन् । बौद्ध धर्मावलम्बीका गुम्बाहरू काठमाडौँका थुम्काहरूमा केन्द्रित छन् । नेपालमा रहेको पौराणिक संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएका बोन, शाक्त, शैव, मष्टो, बौद्ध धर्म र यीसँग अन्तरनिहित संस्कृति सातौँ, तेह्रौ शताब्दीमा आक्रमणमा परेझैँ अहिले नेपालकै चेलाहरू अगाडि देखिएर भित्री रूपमा पश्चिमा धर्मको चेपमा परिसकेका छन्, जुन छद्म भेषमा हाम्रो संस्कृतिमा प्वाल पार्न छिरेका हुन् । अहिले धेरै हिमाली भूभागका घरभित्र रहेका बुद्धका मूर्तिहरूको ठाउँ आयातित मूर्तिले ओगटेका छन् । यो दुःखको कुरा हो ।
दुई हजार वर्ष पुराना बौद्ध गुम्बा र तीन हजार वर्ष पुराना बोन गुम्बा, ती भन्दा पुराना मष्टोका थान, देउली, लिङ्ग पूजाका थानहरू, पञ्चदेवल, ढुङ्गेधारा, पाटीपौवा र तीसँग जोडिएका कलाकृति त कर्णालीका भीर, पखेरा, खरवारी, खर्क, देउराली र अग्ला धुरीभरि छिरलिएका छन् । तिनलाई एकत्रित गरेर अनुसन्धान गरेपछि मात्र कर्णालीमा भएको बोन, शाक्त, शैव, मष्टो, बौद्ध धर्म परम्पराबारे इतिहासदेखि अहिलेसम्मको खाका कोर्न सकिन्छ÷सोच्न सकिन्छ । मेरो यो प्रस्तुति सम्भावनाको एउटा ढोका हो ।
आम नागरिकको दैनिक अवस्था जति दर्दनाक छ, इतिहासका साक्षी ती पुरातात्विक वस्तुको अवस्था झन् नाजुक छ । मानिस भोक, रोग र शोकले कमसेकम कराउन सक्छन् तर इतिहासका ती साक्षी चिच्याउन सक्दैनन् । हालसम्म बाँचेका ती मूर्ति बरु लुकाइएर लेक पार गरिन सक्छन् । भन्न लाज लाग्ने, भन्नैपर्ने, लुकाउन नहुने कुरा के भने हाम्रोमा अझै भोकमरी छ । जबसम्म भोकभोकै भइन्छ त्यसबेलासम्म कसैले केहि गर्न सक्दैन । तर तितो यथार्थ के पनि हो भने, इतिहास, धर्म संस्कृति र सांस्कृतिक क्षेत्रको समग्र संरक्षण, पहिचान र माया जबसम्म हुँदैन तबसम्म न त देश विकास हुन्छ, न त कर्णाली नै । संघीयताले कर्णालीको भोक, रोग, अशिक्षा हटाउने क्रमसँगसँगै पुरातात्विक वस्तु–धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिर, चोर्तेन, देउली, कानी चोर्तेनका भित्तेचित्रको संरक्षण पनि सँगसँगै गरिनुपर्छ । त्यसपछि त राजधानीले इतिहास कर्णालीसँग जोडन बाध्य हुनैपर्छ । त्यसको साँचो कर्णालीवासीसँग छ ।
५. आधुनिक विकास–संरक्षण सम्भावना र चुनौति
आजको प्रविधिको युगमा शान्तिप्रेमी र सद्भावपूर्ण संस्कार र संस्कृति बोकेको देशमा गरिबी हुनुहुँदैन । एकै दिन र एकै वर्षमा परिवर्तन सम्भव छैन । समय लाग्छ । संरक्षणका लागि अर्थ, प्रविधि र जनशक्तिका चुनौति हुनेछन् । तर अब कठिनाइलाई पार गर्दै, इतिहासलाई बचाउँदै आधुनिक युगमा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि कर्णालीवासी नै कस्सिनुपर्छ । मौलिकता, प्राकृतिक छटा र हजारौँ वर्ष पुरानो संस्कृति बोकेर त्यसलाई एक वंशदेखि अर्को वंशमा सार्दै गरेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक वस्तु लोप भए भने हामी आधुनिक टाई झुण्ड्याएका नाङगो प्राणी मात्र हुनेछौँ ।
सम्पदा, संस्कृति, नैतिक आचरण र संस्कार लोप हुँदा आज युरोप रोएको छ । आधुनिकताको नाममा हामी रुन नपरोस् । सडक सञ्जाल, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारमा अब पछि पर्नुहँुदैन । चुनौति अवश्य छ । नयाँ सिद्धान्त, नयाँ खोज गर्न नसके पनि अरुको ढाँचाअन्तर्गत रहेर भौतिक विकाससँगसँगै ऐतिहासिक महŒवका पुरातात्विक वस्तु र संस्कृति बचाउन सकिन्छ । त्यो महŒव बुझेर चीनले पुराना सबै सम्पदाको संरक्षण गरेको छ । धर्म र संस्कृतिको लोप भइसकेपछि त्यसलाई न त ईश्वरवादी न त बोनवादी वा भौतिकवादी कसैले पनि ब्यूँताउन सक्दैनन् । इतिहास बचाइएन भने आधुनिक विकास खोक्रो हुन्छ । त्यसैले अहिले अरबका धेरै देश र एसियाकै मलेसियाले नयाँ इतिहास कोर्न परेको हो । कर्णालीको मौलिकता बचाएर, पुराना सम्पदाको खोज, उत्खनन, संरक्षण, जिर्णोद्धार गरेर एक सय वर्षे कर्णालीको दृष्टिकोण बनाऔँ, त्यसपछि हाम्रो कर्णाली विश्वको मानव सभ्यता र संस्कृतिको विश्वविद्यालय बन्ने छ ।
पृथ्वीसरह नारी सृष्टिकर्ता भइन् । नारीले पुरुषका नारीमाया पाउन थाले– ‘विश्वकी पीडा हरण गर्ने देवी, तिम्रा सामु हामी नतमस्तक छौँ । त्रिलोकनिवासीहरूकी पूजनीया कल्याणकतृ देवी हाम्रा निम्ति वर देऊ’ (दीक्षित, भूमिसूक्त, २०५८ः५४) । मानव सभ्यताको विकास गराउने कर्णालीको माटो र त्यहाँकी जननी हुन् । सिन्धु सभ्यताभन्दा पहिले यो हिमाली उपमहादेशमा मानवको बसोबास थियो । महामातृका सर्वश्रेष्ठ थिए । घुमन्ते जीवन थियो । गण ठूलो नभएसम्म एउटी आमाका सन्तानसँगै
बस्थे । परिवार ठूलो भएपछि अर्को ठाउँमा सर्थे । नयाँ गणको नेता अर्की महिला हुन्थिन् । कर्णालीको नदी सभ्यता, प्रकृतिपूजा, मातृपूजा, बोन, शाक्त, शैव, बुद्ध धर्म र संस्कृतिले त्यसलाई पुष्टि गरेका
छन् । माथिल्लो कर्णालीका क्षेत्रमा भेडाच्याङग्रा, याक र चौरी लिएर अस्थायी गोठमा बस्ने घुमन्ते जीवन अहिले पनि छ । नारीको निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यसैले त्यहाँको जीवन पद्धति दसौँ हजार वर्ष पुरानो हो । मैले मुस्ताङका गाउँहरू, डोल्पाका छार्का, साल्दाङ, द्योतराप, मुगुको मुगुम, हुम्लाको याल्वाङका गाउँमा त्यो जीवनशैली देखेको छु । बासिन्दाका दुःख हटाएर त्यहाँको संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्दै आएको छु ।
त्यसबाहेक आधुनिक युगमा आइपुग्दा कर्णाली त हाम्रो भाषाको उद्गम स्थल हो । खस भाषाले गर्दा नै नेपालको एकीकरण सम्भव बन्यो । भाषाको उद्गमस्थल, आधुनिक राज्यविस्तार, धर्म संस्कृतिको समन्वय, संरक्षण र विस्तारको पछिल्लो इतिहास कर्णालीकै सिँजा उपत्यका र खस साम्राज्य हो ।
पुल, दोबाटो, पधँेरोमा देखेका लिङ्गाकारका चित्र, भित्तेचित्र, काष्ठकला, मष्टोका थान, बोन गुम्बा, देवदेवीका मूर्ति, बौद्ध गुम्बा, बास बस्दा कर्णालीका दाजुभाइसँग गरेका कुराकानी, विदेशीले ५० देखि ७० वर्ष पहिलेदेखि आजसम्म आइपुग्दा लेखेका केहि पुस्तकलाई आधार मान्दा यो क्षेत्रको संस्कृति १० हजार वर्षभन्दा पुरानो छ । महाभारतकालीन हजारौँ वर्ष पुराना दैलेखका देवल, दुई हजार वर्ष पुराना मन्दिर र गुम्बा त कर्णालीमा धेरै छन् । यहाँको अर्को सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने जसरी यहाँको प्रकृतिमा माटो, ढुङ्गा टमक्क मिलेर धरतीको रूप बनेको छ त्यसैगरी यहाँ बोन, शाक्त, शैव, बुद्ध धर्मसँग मिलेर, गाँसिएर यहाँको मौलिक जीवित संस्कृति बनेको छ, जुन अन्यत्र पाइँदैन – त्यो कर्णाली दर्शन र संस्कृति हो । यहाँ जन्मदेखि मृत्युसम्म, चाडपर्व र मानिसको नामकरण र गरगहना पहिरनसम्ममा ती कुरा देख्न, भोग्न पाइन्छ ।
मुस्ताङमा भेटिएका गुफाले हाम्रो क्षेत्रमा मानिसले कृषि र पशुपालन १० हजार वर्ष पहिलेदेखि गरेका थिए भन्ने आधार पाइएका छन् । कर्णालीलाई मैले चरम विकसित परिष्कृत हिमाली सभ्यताको जननी भन्ने गरेको छु । रामायण र महाभारतकालको चर्चा बढी भएकाले त्यसको प्रचार व्यापक भयो । १२ वर्षे वनवास कालमा यो क्षेत्रमा आएर लुकेको दैलेख, अछाम, कालीकोट, जुम्ला आदि जिल्लाका अनेक ठाउँका देवल, मन्दिर भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यो धेरै विकसित भइसकेको युग थियो । तर मानवको बसोबास त्योभन्दा पहिलेदेखि थियो । त्यसैले पाण्डवहरू बास बस्दै त्यो ठाउँमा पुगेका हुन् । त्योभन्दा पहिलेको इतिहास, संस्कार र संस्कृतिको प्रमाणित गर्न खोज गर्न बाँकी नै छ ।
वि.सं. १४५० पछि खस साम्राज्यको पतनसँगै राज्यले कर्णालीलाई कुनै क्षेत्रमा पनि प्राथमिकतामा राखेन । यहाँको धर्म परम्परालाई चौधौँ शताब्दीदेखि ताछ्दै लगियो र त्यस्तो धनी स्वर्गलाई चार माना चामल किन्न चार दिन हिँडेर चार घण्टा लाइनमा उभिन बाध्य पारियो । अब भने संविधानले नै त्यस्तो हुन अवश्य दिनेछैन । अब कर्णालीले प्राकृतिक साधन र स्रोतको धर्म र संस्कृतिलाई बचाउने गरी उपभोग गर्नुपर्छ । भोको पेटको अन्त्यसँगै कर्णालीले इतिहास खोज्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ– बोन, शाक्त, शैव, सनातनी हिन्दू र बौद्ध धर्म–दर्शन, संस्कृति र तीसँग जोडिएका परम्परा र सभ्यता अध्ययन गर्ने यो विश्वको खुला विश्वविद्यालय हुने सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
दसौँ हजार वर्षको इतिहास पाउनु भनेको शिव, सेनरेव, बुद्धलाई साक्षात पाएबराबर हो । त्यस्तो अवसर सबैले पाउँदैनन् । इँटा लुकाएर लैजाँदैमा बुद्ध लुम्बिनीबाहेक अन्यत्र जन्मेको भनेर पुष्टि हँुदैन । माथि चर्चा गरिएका धर्म–दर्शन एवम् संस्कृतिका धरोहर अहिले मृतावस्थामा छन् । ब्यूँताएर भरणपोषण गर्न सके नेपालको मात्र होइन विश्वको सम्पदा बन्नेमा दुई मत छैन । विश्वको नागरिकको त्यो इतिहास देख्न पाउने अधिकार रहन्छ । कसको बाटो हेरेर कहिलेसम्म हामीले पर्खने ? यो प्रश्न निकै जटिल छ, तापनि नयाँ राजनैतिक संरचना र अधिकारले कर्णालीले नै भूमि माता, संस्कार र संस्कृतिको जन्म दिने माता र वर्तमान अवस्थामा विभिन्न नाममा रहेका ती माताका सन्तान बोन, शाक्त, शैव, वैष्णव, बौद्ध धर्म, परम्परा र संस्कृतिको भरणपोषण गरेर स्वस्थ बनाउन सक्छ । यसमा म विश्वस्त छु । शुभकामना !
अधिकारी, नवराज (२०७४), नेपाल सम्पदा विशेषाङ्क, अङ्क २, असोज–कात्तिक, सूचना विभाग ।
अधिकारी, सूर्यमणि (२०६१), खस साम्राज्यको इतिहास, काठमाडौँ ः भुँडीपुराण प्रकाशन ।
दीक्षित, मदनमणि, (२०७२), मेरी नीलिमा, काठमाडौँ ः बुक हिल पब्लिकेशन ।
दीक्षित, मदनमणि, (२०६५), ऋग्वेदःकेही प्रमुख सूक्त, काठमाडौँ ः शिखर मुद्रण अपसेट ।
दीक्षित, मदनमणि, (२०५९), हिन्दू संस्कृतिको परिशिलन, लुस प्रेस ।
पराजुली, विष्णुप्रसाद शर्मा, (२०७४), डोल्पो ः विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय, काठमाडौँ ः भुँडीपुराण प्रकाशन ।
पराजुली, विष्णुप्रसाद शर्मा, (२०७४), तिब्बत यात्रा, काठमाडौँ ः भुँडीपुराण प्रकाशन ।
प्रभात, विष्णु, ज्ञानबिन्दु ११, प्रकृतिपूजक बोन दर्शन ः संक्षिप्त परिचय ।
प्रभात, विष्णु, (२०७४), प्रज्ञा संसकृत कोष, काठमाडौँ ः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
प्रश्रित, मोदनाथ, (२०७४), नेपाल गणयुगदेखि राष्ट्र युगसम्म, काठमाडौँ ः जनता प्रकाशन तथा
प्रसारण लि. ।
लामिछाने, माधवप्रसाद, (२०७३), नेपाली समाजमा तन्त्र परम्परा, काठमाडौँ ः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
हेगन, टोनी, (२०५८), नेपालको चिनारी, ललितपुर ः हिमाल किताब ।
Cameron, Iam, (1924), Mountains of the Gods, Great Britain.
Kenneth M. Bauer, (2004), High Forneiters, New York : Columbia Uni. Press.
Peter, Matthiessen, (1979), The Snow Leopard, London : Chatto & Windus.
Philip, sturgeon M.D, (1998), Himalayan Echoes, India : Books Faith.